သတင်း - Dayu “Yudi” နှင့် “Yuhui” စီးရီး၏ IoT ထုတ်ကုန်များကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Dayu Water Conservation Group မှ သီးခြားထုတ်လုပ်ထားသော "Yudi" နှင့် "Yuhui" ထုတ်ကုန်စီးရီးများသည် ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ပြီး လက်တွေ့ကျသော စမတ်ရေမီတာများနှင့် "ပညာ၊ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဒေတာ" ကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ရေအရင်းအမြစ်အဝေးထိန်းကိရိယာများဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည် စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ရုံသာမက အသွင်အပြင် ဒီဇိုင်းမှာလည်း အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး လှပပါသည်။အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုအောက်ပါအတိုင်းမိတ်ဆက်ပေးသည်။
1. "Yudi" စီးရီးထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
"Yudi" စီးရီး၏ ultrasonic ရေမီတာများသည် စီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းနှင့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော တွက်ချက်မှုနှင့် ရေထုထည်ပေးပို့ခြင်းအတွက် ultrasonic အချိန်ကွာခြားမှုနိယာမအပေါ် အခြေခံ၍ ရေမီတာအသစ်ဖြစ်သည်။RS485 ဘတ်စ်ကားနှင့် အခြားဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများမှတစ်ဆင့် အဝေးထိန်းမီတာဖတ်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အား ပုံသေပုံစံဖြင့် RS485 ကြားခံစနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ထုတ်ကုန်၏တိကျမှုမြင့်မားသောရေတိုင်းတာမှုရရှိရန် သီးခြားတီထွင်ထားသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်စနစ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
1. နာရီကိုယ်ထည်၏တည်ဆောက်ပုံသည် အစားထိုးနိုင်သော core tube ဖြင့် modular ဒီဇိုင်းကို လက်ခံပါသည်။core tube ကို အစားထိုးခြင်းဖြင့်၊ monophonic၊ multi-channel၊ through-beam installation နှင့် reflection installation ကဲ့သို့သော အမျိုးမျိုးသော အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံစံများကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2. တိကျမှုမြင့်မားသော ultrasonic အာရုံခံကိရိယာနှင့် အချိန်တွက်ချက်မှု ချစ်ပ်ကို အသုံးပြု၍ အငြိမ်သုညတန်ဖိုးအချက်ပြလှိုင်းသည် သေးငယ်သည်၊ တက်ကြွသောတိုင်းတာမှုတွက်ချက်မှုသည် တိကျပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
3. တိုင်းတာခြင်းယန္တရားတွင် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဖြောင့်ဖြောင့်ပုံစံဒီဇိုင်း၊ သေးငယ်သောဖိအားဆုံးရှုံးမှု၊ နှင့် ပိုမိုတိကျသောတိုင်းတာခြင်း
4. အလိုအလျောက်အမှားအယွင်းရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၊ တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော တိုင်းတာမှုဖြင့် အချက်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။
5. ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှစ်ခု၊ ပါ၀င်သော စွမ်းအင်မြင့် လီသီယမ်ဘက်ထရီ၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပါ။
6. လိုက်လျောညီထွေရှိသော တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်း၊ အလျားလိုက်နှင့် ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
2. "Yuhui" စီးရီးထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
"Yuhui" ရေအရင်းအမြစ်အဝေးထိန်းကိရိယာသည် စီးဆင်းမှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ရေဖိအား/ရေအဆင့်၊ မြေဆီလွှာအစိုဓာတ်စသည်ဖြင့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းနိုင်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲစနစ်ဖြင့် တိုင်းတာခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ဒေတာထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် အဝေးထိန်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများအသုံးပြုရန်။
1. WeChat applet အဝေးမှ အားပြန်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရေရယူရန် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းကတ် ကြိုတင်ငွေပေးသော ပွတ်ဆွဲခြင်းကို ပံ့ပိုးပါ။
2. ၎င်းသည် ဆိုလီနွိုက် အဆို့ရှင်များ၊ လျှပ်စစ်အဆို့ရှင်များ၊ ရေစုပ်စက်များ စသည်တို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး လျှပ်စစ်အဆို့ရှင်အဖွင့်ကဲ့သို့သော အခြေအနေ တုံ့ပြန်ဝင်ရောက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
3. ပံ့ပိုးမှု စီးဆင်းမှုမီတာ၊ ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ၊ ဘက်ထရီဗို့အားနှင့် အခြားသော ကန့်သတ်ချက်များ ထောက်လှမ်းမှုနှင့် ဖိအား/ရေအဆင့်၊ စီးဆင်းမှု ချိန်ညှိထိန်းချုပ်မှု
4. ၎င်းသည် ပိုက်ကွန်ရက်စနစ်၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြုပြင်မှုအတွက် အဆင်ပြေသည့် ပိုက်ကွန်ရက်၏ ယိုစိမ့်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စာရင်းဇယားများကို သိရှိနိုင်သည်
5. ပုံမှန်အစီရင်ခံခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် 4G ကွန်ရက်ဝင်ရောက်မှုကို ပံ့ပိုးပါ၊ သင်သည် အစီရင်ခံခြင်းကြားကာလကို သင်ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
"Yudi" စီးရီး၏ ultrasonic စမတ်ရေမီတာနှင့် "Yuhui" စီးရီးများ၏ ရေအရင်းအမြစ်အဝေးထိန်းကိရိယာ အာရုံခံကိရိယာထုတ်ကုန်များသည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကို စမတ်ကျကျဖြစ်စေရန် အဖွဲ့၏ကော်ပိုရိတ်မစ်ရှင်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် Dayu Water Conservation Research Institute မှ တီထွင်ထားသည့် အချက်အလက်နှင့် အသိဥာဏ်ပညာများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ စမတ်ရေကိစ္စအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ရေစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ထုတ်ကုန်အသစ်များ။